Calmol (ကယ်လ်မောလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Calmol (ကယ်လ်မောလ်)
Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Calmol (ကယ်လ်မောလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Calmol® ကို အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးနှင့် အဖျားပျောက်ဆေးအနေနှင့် အသုံးပြုကြသည်။ ထို့ပြင် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားနာခြင်း၊ အရိုးအဆစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ကျောနာခြင်း၊
သွားကိုက်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်း နှင့် အဖျားပျောက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုကြသည်။ ထိုဆေးသည် သာမန် အဆစ်ရောင်ခြင်းများကို ပျောက်ကင်းနိုင်သာ်လည်း နဂိုရောဂါ အခံဖြစ်သော ရောင်ရမ်းမှုများအတွက်မူ အကျိုးမရှိပါ။
အထက်ပါဖော်ပြထားသော ရောဂါများအပြင် တခြားသောရောဂါများတွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်။ သိလိုသည်များရှိသော် ဆရာဝန်အားမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဝါးစားနိုင်သော Calmol ဆေးပြားများကို မျိုမချမီ ဝါးစားရမည်။ ပျော်နိုင်သော ဆေးများကို သန့်စင်ပြီး ခြောက်သွေ့သော လက်များဖြင့် ကိုင်ပါ။ ထို့နောက်လျှာပေါ်တွင် အရည်ပျော်သွားသည် အထိ မဝါးစားဘဲ တင်ထားပါ။
Calmol ရေဆူဆေးပြားများကို ရေ ၁၁၀ မီလီနှင့် ဖျော်သောက်ပါ။ သေချာစွာမွှေပြီးမှသောက်ပါ။ ဆေးအားလုံးကို မကျန်ရအောင် ဖန်ခွက်ထဲတွင် ရေနဲနဲထပ်ကျင်းပြီးသောက်ပါ။
စအိုထဲထည့်သည့် ဆေးတောင့်ကို လုံး၀ မသောက်ရ။ စအိုထဲထည့်ရန်သာ ဖြစ်ပါသည်။ မထည့်မီ လက်ကို ဆပ်ပြာနှင့် သေချာစွာဆေးကြောပါ။ ပြီးလျှင် ဆီး၊ ဝမ်းသွားထားပါ။ ထည့်ခါနီးတွင် ဆေးတောင့်ကို တိုက်ရိုက်ကိုင်ခြင်း မပြုဘဲ ကာထားသော အပေါ်လွှာကို ကိုင်ပါ။ ဆေးတောင့်သည် လက်ထဲတွင် အရည်ပျော်သွားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူနာသည် ဘေးစောင်းလဲလျောင်းနေရမည်။ ထို့နောက် ဆေးတောင့်ရှိ ချွန်နေသော အစိတ်အပိုင်းမှစထည့်ပါ။ ထည့်ပြီး မိနစ်အနည်းငယ်မျှ ငြိမ်နေပါ။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် အရည်ပျော်သွားသောအခါ ခိုးလိုးခုလုခံစားရတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဆေးတောင့် ထည့်ပြီးပြီးချင်း အိမ်သာမတက်ပါနှင့်။
Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Calmol® ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Calmol® ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Calmol®
Calmol® ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Calmol® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Calmol (ကယ်လ်မောလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Calmol ကိုသောက်နေစဉ်တွင် သွေးတွင်းရှိ အချိုဓါတ်များ အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သောကြောင့် သင်သည် ဆီးချိုရောဂါ ရှိပါက ဆေးသောက်နေစဉ်အတွင်း သွေးတွင်းရှိ အချိုဓါတ်များ အပြောင်းအလဲဖြစ်လာလျှင် ဆရာဝန်အားပြောပါ။
သင်သည် တနေ့လျှင် အရက်နှင့် အရက်ပါသော အစားအစာကို ၃ မျိုးနှင့် အထက်ပိုစားခြင်း၊ အရက်ကြောင့် အသည်းခြောက်ရောဂါရှိခြင်း စသည်တို့ ရှိပါက ဆေးမသောက်မီ ဆရာဝန်အား ကြိုပြောပါ။
ဆရာဝန်သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကို မမေးဘဲနှင့် အအေးမိပျောက်ဆေး၊ အနာပျောက်ဆေး များကို ဝယ်မသောက်ပါနှင့်။ မတော်တဆမှားပြီးသောက်မိလျှင်လည်း ထိုဆေးဘူးရှိ အညွှန်းတွင် Calmol®, acetaminophen , APAP စသည်တို့ ပါ မပါ ဖတ်ရှုပါ။
Calmol® သောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း အရက်သောက်ခြင်းသည် အသည်းကို ပိုပြီး ထိခိုက်စေသောကြောင့် ရှောင်ကျဉ်ပါ။
Calmol® သောက်ခြင်းသည် ပမာဏများသွား လျှင်လည်းအသည်းကို ပျက်စီးစေပါသည်။
အောက်ပါတို့ ဖြစ်လာသော် ဆေးကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
ဆေးသောက်ပြီး ၃ ရက်ခန့်အထိ ဆက်ဖျားနေလျှင်
ဆေးသောက်ပြီး ၇ ရက်ခန့်အထိ ဆက်နာနေလျှင် (ကလေးများတွင် ၅ ရက်ခန့်အထိ)
ရောဂါလက္ခဏာများ ပို ဆိုးလာခြင်း၊ ပိုတိုးလာခြင်းများရှိလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဓါတ်မတည့်ခြင်း (အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း) တို့ဖြစ်လာပါက အရေးပေါ် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
အောက်ပါပြင်းထန်သော ဆိုးကျိုးများခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်း ပြသရမည်ဖြစ်သည်။
အဖျားငွေ့ငွေ့ဖျားခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ခံတွင်းပျက်ခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Calmol (ကယ်လ်မောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calmol® ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Calmol (ကယ်လ်မောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Calmol® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Calmol (ကယ်လ်မောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Calmol® ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြးီပါတယ်။
အရက်စွဲရောဂါများ ရှိပါက သင့်အတွက် စိတ်ချရမှုရှိစေရန် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို မေးမြန်းပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 325- 650 mg ၊ ၄/ ၆ နာရီခြား သို့မဟုတ်1000mg ၆/ ၈ နာရီခြား (သောက်ဆေး၊ စအိုထည့်ဆေး)
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ325- 650 mg ၊ ၄/ ၆ နာရီခြား သို့မဟုတ်1000mg ၆/ ၈ နာရီခြား (သောက်ဆေး၊ စအိုထည့်ဆေး)
လူကြီးများအတွက် အများဆုံးသောက်သုံးနိုင်သော ဆေးပမာဏမှာ တခါသောက်လျှင်1000 mg နှင့် တနေ့လျှင် 4000mg
သင်သည် တနေ့လျှင် အရက်နှင့် အရက်ပါသော အစားအစာကို ၃ မျိုးနှင့် အထက်ပိုစားခြင်ရှိပါက တနေ့လျှင် 2000 mg ထက်ပိုမသောက်ရ။
ကလေးတွေအတွက် Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးလူနာများမှာဘယ်လောက်အချိုးအစားပေးရမလဲဆိုတာအတည်မပြုရသေးပါ။ သင့်ကလေးငယ်အတွက် သောက်သုံးရန် စိတ်ချရမှုရှိချင်မှရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဆေးဝါးမဆို အသုံးမပြုရသေးခင်မှာစိတ်ချရမှုအနေအထားကိုအပြည့်အဝနားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံရရှိရန်အတွက် သင့်ရဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Calmol (ကယ်လ်မောလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Calmol® ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Calmol® ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Calmol®.http://www.webmd.com/drugs/2/drug-57595/Calmol-oral/details#interactions. Accessed November 5, 2016